स्वास्थ्य पेज » लकडाउन र क्वारेन्टाइनको उत्पादन : थकान, तनाव, चिन्ता र रिस लकडाउन र क्वारेन्टाइनको उत्पादन : थकान, तनाव, चिन्ता र रिस – स्वास्थ्य पेज
नेपालगन्ज १५, साउन ।
७ असार २०७७ को राति बझाङको छविस पाथीभेरा गाउँपालिका ७ मझखोरी माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा एक ३० वर्षीय पुरुषले आत्महत्या गरे। तीन दिनअघि मात्रै भारतबाट फर्केर उनी स्थानीय उमेश बोहरा र जनक बोहरासँगै सो क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए।
उमेश भन्नुहुन्छ, ‘ती व्यक्ति बेलाबेलामा आफू बसेको कोठामा बाहिरबाट ताल्चा लगाउँछु र घर गएर बस्छु भन्थे। एक दिन त दिनभरि कोहीसँग बोलेनन्। अर्को दिन राति झुण्डिएर आत्महत्या गरेछन्। हामीले भोलिपल्ट बिहानमात्रै थाहा पायौं।’
क्वारेन्टाइन हदै अव्यवस्थित थियो। तनाव बोकेर फर्किएका ती युवालाई सम्झाउने, बुझाउने र मनोपरामर्श दिने व्यवस्था त परको कुरा, राम्रो खाने, बस्ने सुविधासमेत थिएन। ‘कोरोना सर्ने डरले क्वारेन्टाइनमा कोही पनि आउँदैनथ्यो,’ जनक भन्नुहुन्छ ‘तीन चार दिनमा एक पटक पुलिस आउँथे, टाढैबाट एकछिन हेरेर जान्थे।’
१६ जनाको समूहमा भारतबाट फर्किएका उनी १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर १४ असारमा घर फर्किएका थिए। ‘बिहान उनी गाउँ नजिकैको जंगलमा भैंसी चराउँदै रहेछन्’ खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका प्रवक्ता रामबहादुर सिंहले भन्नुभयो ‘कसैले फोन गरेर उनलाई कोरोना लागेको कुरा सुनाइदिएछ। त्यो सुन्नासाथ त्यहींको एउटा रूखमा गएर झुण्डिएछन्।’
त्यसैगरी अर्घाखाँचीको शितगंगा(५ मा ४५ वर्षीय युवा, रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका ५ का ३१ वर्षीय युवा र तनहुँको घिरिड गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का एक ४९ वर्षीय पुरुषले पनि आत्महत्या गरेका छन्। उनीहरू तीनै जनाको आत्महत्या प्रकृति समान छ। विदेशबाट घर फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेका बेला कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि मानसिक विचलनले आत्महत्या गरेको देखिन्छ।
मनोसामाजिक अभियन्ता जगन्नाथ लामिछाने भन्नुहुन्छ, ुसामाजिक मूल्य र प्रतिष्ठा सकियो भन्ने ठानेर मानिसले आफैंलाई समाप्त गरेको हो यो। हुन पनि ऋण लिएर विदेश गएको मानिस रोग बोकेर फर्किएँ भन्ने भएपछि जुनसुकै निर्णयमा पनि पुग्छ। चिकित्सकीय उपचारबाट मात्रै यसको समाधान हुन्न।ु
अब नेपालका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर हेरौं। नेपाल सरकारले तयार गरेको ‘कोरोनाभाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६’ अनुसार, क्वारेन्टाइनमा सफा र सुरक्षित शयन कक्ष, एक ओछ्यान र अर्को ओछ्यान बीचमा निश्चित दूरी, प्राथमिक उपचार सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
बाजुरा अस्पतालका प्रमुख डा. रूपचन्द्र विश्वकर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्वारेन्टाइनहरूमा न्यूनतम मापदण्ड बमोजिमको सुविधा नभएको बताउँनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘मानिसको चाप धेरै बढ्यो, स्थानीय तहहरूले यसको व्यवस्थापन गर्न नै सकेनन्।’
देशभरि सबैजसो स्कूल र स्थानीय सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो। ती भवनहरू मानिस रात बस्ने गरी बनाइएका संरचना नै होइनन्। अझ कतिपय ठाउँमा त खेतमा पाल टाँगेर, तराई–मधेशमा रूखमुनि समेत क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो। सुर्खेतको एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेकी एकजना महिलाले ‘पढ्ने प्रयोजनका लागि बनाइएका डेस्क वा बेन्च जोडेर सुत्नु परेको, फोन चार्ज गर्न समेत विद्युतको सुविधा नपाएको र खानेकुरादेखि सुत्ने कपडासम्मको अभाव भोगेको’ सुनाएकी थिइन्।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.दिव्या दवाडी स्कूल भवनको संरचना नै क्वारेन्टाइन बनाउन उपयुक्त नभएकाले बलात्कार, चोरी, आत्महत्या जस्ता घटना भएको बताउँनुहुन्छ। दवाडी भन्नुहुन्छ, ‘स्कूल भवन दिउँसोको समयमा पढ्नेरपढाउने कामका लागि बनाइएको हो। क्वारेन्टाइन बनाउन होइन।’ डा. दवाडीका भनाइमा, स्कूल भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाइएका कारण पनि महिला र बालबालिका असुरक्षित भएका हुन्।
कतिपय भुक्तभोगीहरूका भनाइमा संरचना मात्रै अव्यवस्थित होइन, व्यवस्थापनमा खटिएका व्यक्तिको व्यवहार पनि मानवीय थिएन। त्यसले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई थप बेचैन बनाउँथ्यो। केही माग्यो भने ‘खान बस्न पाएकै छौ कति किचकिच गरेको’ भनेर खप्की खानुपर्थ्यो।
विशेषज्ञका अनुसार, क्वारेन्टाइनमा बसेका वेला अरू वेला भन्दा भिन्नै सोचाइ आउँछ। घाँटी खसखस गर्यो वा सामान्य रुघा–खोकी लाग्यो भने पनि ‘लौ मलाई त कोरोना नै भयो कि के हो’ भन्ने सोच आउँछ। त्यसमाथि लकडाउनका कारण रोजगारी गुम्दा अब के खाने के खुवाउने भन्ने सोचेर पनि धेरै तनावमा हुन्छन्। उनीहरूमध्ये केही त आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुग्छन्। मनोविद् डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना भन्नुहुन्छ, ‘आत्महत्या गर्नेहरूको आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि र अवस्था नियाल्ने हो भने यो स्पष्ट हुन्छ।’
साना बच्चाहरूसँग क्वारेन्टाइनमा बसेका आमाका समस्या अर्कै थिए। केटाकेटीले छिनछिनमा खाना माग्ने। दिने केही नहुने। साँझ–बिहान बाहेक अरू वेलामा खानेकुरा नपाइने। पैसा दिएर किन्न पठाउँ भने ल्याइदिने मान्छे नहुने। झापाको एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेकी एक महिला भन्छिन्, ुकिनेर खाजा खान पैसा दिन खोज्दा पैसाबाट पनि कोरोना सर्छ भनेर कसैले पनि पैसा छुन मानेनन्।ु
ठूल्ठूलो संख्यामा मानिस राख्नुपर्ने बाध्यताले क्वारेन्टाइनहरू अव्यवस्थित भएको देखिन्छ। सुर्खेतको सिम्टा गाउँपालिकाले भोगेको असजिलो यसको एउटा उदाहरण हो। अध्यक्ष कविन्द्र केसीको भनाइ छ, ‘सिम्टा गाउँपालिकाका ४८ वटा क्वारेन्टाइन र एउटा आइसोलेशनमा २० जेठ २०७७ मा करीब २७०० मानिस थिए।’ अध्यक्ष केसी भन्नसहसन्छ, ‘यति हुँदा पनि हामीले हार खाएनौं।’
आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी काम गर्ने संस्था ‘द स्कूल अफ साइकोलोजी’ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका मनोविद् डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना लकडाउन यताका तीन महीनामा आत्महत्या गर्नेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य रूपमा बढेको बताउँनुहुनछ । उहाँको पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्या गर्ने दर १० प्रतिशतले बढिरहेको छ।
अनिताले सँगै रहेका साथीहरूसँग आफ्नो मन खोलिन्। साथीहरूले ‘मन बलियो बनाउनुपर्छ, धेरै मानिस निको भएर घर गएका छन्’ भने। तत्कालै मनोपरामर्शकर्ता शर्मिला बिसीलाई अनिताको समस्या जानकारी गराइयो। शर्मिलाले पनि तत्कालै फोन मार्फत अनितालाई ‘काउन्सिलिङ’ गर्न सुरू गर्नुभयो । ।
अनिता भन्नुहुन्छ, ‘शर्मिला म्याडमले फोनमा लामो कुरा गरेर हौसला दिनुभयो। आइसोलेशनमा अरू पनि मानिसहरू थपिंदै गए। घरपरिवार दुःखसुखका कुरा गर्दै समय बित्दै गयो। ३५ दिन बसेर म कोरोना जितेर घर फर्किएँ।’ अहिले अनिता संक्रमितहरूलाई हौसला र प्रेरणा दिन थालेकी छिन्।
नेपालगञ्जका मनोपरामर्शकर्ता भोजराज शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘काउन्सिलिङ र योगले मनमा स्फूर्ति ल्याउँछ। त्यसैले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा बस्नेहरूको तनाव कम गर्न यो अति आवश्यक पर्छ।’
शर्माका भनाइमा, तनाव व्यवस्थापन गर्न त्यस बाहेकका उपायहरू पनि छन्। जस्तो कि सामाजिक सञ्जालमा आएका अपूर्ण, अविश्वसनीय र गलत समाचारहरू हेर्न र सुन्न बन्द गर्ने। शारीरिक व्यायाम तथा ध्यान गर्ने, पर्याप्त मात्रामा सुत्ने, साथीभाइ तथा आफ्नो नजिकको मान्छेलाई फोन गरेर कुराकानी गर्ने। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यति गरियो भने पनि मनमा धेरै शान्ति आउँछ।’
मनोचिकित्सकहरूका अनुसार, कोरोना त्रासका असर पनि उमेर समूह अनुसार फरक फरक हुने गरेको छ। जस्तो कि अहिले बालबालिकामा निद्रा नलाग्ने र अरू उमेरजन्य गतिविधि नगर्ने समस्याहरू देखिन थालेका छन्। ‘हेर्दा बालबालिकामा पेट दुख्ने समस्या देखिने तर त्यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको’ चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मनोचिकित्सक डा।पवन शर्माका अनुसार चाहिं, लकडाउनको अवधिमा बालबालिकामा एञ्जाइटी अर्थात मनोत्रास, कन्भर्जन डिस्अर्डर र एडजस्टमेन्ट डिस्अर्डर जस्ता समस्या देखिन थालेका छन्।
उहाँ भन्नुुहुन्छ, ‘लकडाउन यता मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेको छ। आर्थिक संकटले मानिसलाई तनाव निम्त्याएको छ। प्रहरीका अनुसार, लकडाउनका तीन महीनामा आत्महत्या गर्नेको संख्या १८०० बढी भयो। यो ज्यादै गम्भीर अवस्था हो।’
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल यसलाई ‘सेवा, सुविधा र सुरक्षा दिने काममा राज्य असफल भएपछिको परिणाम’ भन्नुहुन्छ। ‘हामीसँग भएका पुराना सामाजिक र सांस्कृतिक सुरक्षाका संरचनाहरू भत्किसकेका छन्’ ढकाल भन्नुुन्छ, ‘यस्तो अवस्थामा राज्यबाट पनि सहयोग नपाउने भएपछि जसलाई सामाजिक सुरक्षा चाहिन्थ्यो, उनीहरूमा मनोसामाजिक समस्या बढ्दै गएको हो।’
तर मनोविद् डा.नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना कारणहरू जे–सुकै भए पनि आत्महत्याका घटना कम गर्न तत्काल मानसिक स्वास्थ्य साक्षरताको अभियान शुरू गर्नुपर्ने बताउँनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सामुदायिक स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। भएका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र थप हेल्पलाइन सेवाहरू प्रभावकारी नबनाई हुँदैन।’
डा. ठगुन्ना भन्नुहुन्छ, ‘क्वारेन्टाइनमा भएका आत्महत्याका घटना नियाल्दा सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरूलाई लक्षित गरेर स्वरोजगार र सीप प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने हो भने आत्महत्या र मनोसामाजिक समस्या धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।’